Sawiro: Faahfaahin ku saabsan khasaarihii ka dhashay qaraxii ismiidaaminta ee Baladweyne - Caasimada Online
Home Warar Sawiro: Faahfaahin ku saabsan khasaarihii ka dhashay qaraxii ismiidaaminta ee Baladweyne
Sawiro: Faahfaahin ku saabsan khasaarihii ka dhashay qaraxii ismiidaaminta ee Baladweyne
Beledweyne (Caasimadda Online) – Wararka naga soo gaarayo magaalada Beledweyne ee xarunta Gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in Qarax ismiidaamin ah goordhow ka dhacay magaaladaasi.
Ruux soo xirtay Jaakadaha Walxaha Qarax ayaa isku qarxiyay dad ku sugnaa maqaayad shaaha lagu cabo oo ku taal agagaarka xarunta maamulka Gobolka Hiiraan, iyadoo jiro khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac.
Ilaa hadda waxaa la xaqiijinayaa dhimashada Saddex ruux oo uu ka mid yahay qofkii geystay weerarka ismiidaaminta ah wali qeybo ka mid ah jirkiisa lagu arkayo halka uu qaraxu ka dhacay.
Guddoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan Cumar Aadan Ibraahim Baadiyoow oo shir jaraa’id goobta ku qabtay ayaa sheegay in labo ruux ku dhinteen qaraxa.
Dadka dhaawacmay ayaa waxaa ku jira saddex wariye ah oo u shaqeynayay TV kala ah Jubbaland, Saab, iyo RTN, waxaana la sheegay in wariyaha dhaawac culus uu soo gaaray wariyaha C/llaahi Cismaan Macalin oo ka tirsan TV Jubbaland.